Tilmaamaha Nadiifinta Tufaaxa ee Qalabkayaga: "Marna Biliij ama Hydrogen Peroxide" | Wararka IPhone
Jordi Gimenez | 20/07/2021 20:00 | Alaabada Apple
Way iska cadahay taas isticmaale kasta wuxuu leeyahay qaab u gaar ah oo lagu nadiifiyo ama lagu hagaajiyo iPhone, iPad, Mac, AirPods, dhinacyada iyo alaabooyinka kale ee Apple.. Xaaladdan oo kale ma dhihi karno "wax kastaaba way socdaan" si qalabkeennu u nadiifsan yahay oo jeermis loo dilay, gaar ahaan hadda in isticmaaleyaal badani ay xoogaa waalli ku noqon karaan arrinta COVID ... Laakiin sidoo kale waxaa jira walaacyo kale, gaar ahaan dhegaha. waana sababta tan tan Apple ay si cad noogu sharraxeyso waxa ay tahay inaan sameyno si aan u nadiifino qaybtan websaydhka.
Apple waa ogtahay waxaas oo dhan waana sababtaas tan ay u soo saartay nooc cusub qayb web gaar ah si dadka isticmaala ay si cad u ogaadaan waxa ay u isticmaali karaan ama u isticmaali karin nadiifinta qalabkooda, Waxa iska cad ayaa ah in waligeed iyo duruuf kasta oo ay tahay inaadan isticmaalin biliij ama hydrogen peroxide, taas oo ah hydrogen peroxide. tusaale ahaan ... Kani waa soo koobid kooban oo ah waxa Apple ku muujineyso qaybtaan degelkan ah.
Ma isticmaali karaa jeermi-dile si aan u nadiifiyo wax soo saarkayga Apple?
Si tartiib ah ayaad u tirtiri kartaa masaxa lagu qooyay 70% aalkolada isopropyl, 75% aalkolada ethyl, ama Clorox disinfectant tirtireyaasha oo ka nadiifiya meelaha adag ee aan dusha lahayn ee alaabtaada Apple, sida shaashadda, kumbuyuutarka, iyo dusha kale ee bannaanka. Ha isticmaalin badeecooyin ay ku jiraan biliij ama hydrogen peroxide. Ka ilaali qoyaanka inuu soo galo furitaanka oo ha ku quusin sheygaaga Apple wakiil kasta oo nadiifinta ah. Ha u isticmaalin jeermis dusha dharka ama dusha maqaarka.
Taladayda arintan ku saabsan waa cad tahay, maro yar oo qoyan biyo (oo aan ka badin) aaladaha iyo shaashadaha badankood, ka dib si aad u wanaajiso nadaafadda iyo waqti ka waqti waxaad isticmaali kartaa masaxyada ay iibiyaan qaar ka mid ah dukaamada waaweyn ama xitaa kuwa ay yihiin lagu daray markii aan soo iibsaneyno shaashad shaashad ah ama wax la mid ah oo ku daraya tirtir qoyan iyo qalalan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, caqliga saliimka ahi waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nadiifinta qalabka. markaa isticmaal oo ha ku daboolin qalabkaaga (ama ha ka yimaadeen Apple ama yuusan ka ahayn) alaabada wax duminaysa ee dhaawici kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Tilmaamaha talooyinka nadaafadda ee Apple ee aaladahayaga: "Weligaa ha caddeynin ama hawo-hydrogen peroxide"
Isbeddelo waaweyn ayaa ku dhacay ipad yar yar laga bilaabo 2021